The Thijs H. PsyOp yaifanira kukanganisa nyanzvi yehupfumi uye iyo yakatozadzika nhasi: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 3 June 2019	• 8 Comments
Zvakaoma kuchengetedza pamwe nekushanda kwepfungwa dzakawanda (PsyOps) zvauri kupoteredza. Ini ndatove ndakazivisa kuti zvinhu zvakadai seaAnf Faber zvinofanira kutungamirira kune kuiswa kwe 'joint joint' app. Nhasi tinoona kuiswa kwepurogiramu iyoyo kusundirwa nemhizha; apo ivo vachangobva kuchinja zita racho kuti 'Sherlock', kuitira kuti muverengi apo Googling kune iyo purogiramu isingagumi pawebsite yeMartin Vrijland uye anoona kuti yakanga yakarongwa kwenguva yakareba.
Psychological operation (PsyOps) anoshandiswa nguva uye nguva zvakare kuti atange mutemo mutsva nematanho. Sangano rakadaro rinoita serinobatsira, asi chaizvoizvo rinoita ruramisiro hafu yeNetherlands kwete kungoita sarudzo chete, asiwo inokupa kodzero yekushandisa kamera yako, maikorofoni uye nzvimbo, kuitira kuti iwe unogona kutenderwa kuti uzvifungire iwe pachako.
Muchikamu changu kubva ku29 munaMay last, ndakapa muchidimbu zvinyorwa zvese zvemhosva dzekuponda kwemakore achangopfuura zvinofanira kutungamirira kumitemo mitsva nemiganho. Ingovaverengera zvakare (pano). Ndatotanga kuzivisa kuiswa kwebasa musi wa18 December 2017 to. Izvozvi, mune zvose izvozvo, izvo zvandafanotaura zvaitika, asi zvinoita sekuti kunyanya kwemashoko kwakasimba kwazvo zvokuti haichazoiti kana iwe uchizivisa chokwadi; vanhu chete havadi kunzwa kana kuzviona.
Munguva iyi tiri kuchinjwa zvakare nemumwe mhaka inoshayikwa (Anja Schaap), kuitira kuti tikwanise kutora iyo purogiramu itsva. Uyewo kutsvaga imwe pyromaniac muGouda, zvichida inobatsira nekutaridzika kwakakurumidza kwepurogiramu iyoyo yepayipi. Hungu, chokwadi tinoona imwe mifananidzo yeiyo isipo Anja Schaap uye moto wacho chaiwowo, asi rini ruchazotanga kuona kuti isu tiri kutambidzwa nematambudziko akaumbwa; maitiro ekuuraya akazvigadzirisa umo vanhu vanyori vakakurumbira kuburikidza nemagetsi epafilidio studio (neinoti software) se "fake yakadzika"?
Ne nyore-ku-download software unogona kugadzira munhu asiripo uye kugadzira nhoroondo yose; kusanganisira vhidhiyo uchapupu, mapikicha uye kusanganisira shamwari uye vanozivana avo vanowirirwawo muhupenyu kuburikidza nekudzikisa maitiro (chengetedza iyi link uye ona kuti izvo zvinoshanda sei. Muterevhizi weTV kana Facebook anoshandisa maonero aanoona kuona zvifananidzo zvinoratidzika sehupenyu. Uye saka iwe unogona kuunza nyore nyore vanhu mukutambira kwemamiriro emitemo mitsva. Izvo zvakakodzera kukosha.
Sezvambotaurwa, ndakatotanga kuzivisa pa 29 May mai vehupfumi avo vaizovhiringidzwa. Nhasi tinoverenga mukati de Telegraaf:
Svondo rapera dare reLimburg rakasarudza kuti Mondrian inofanira kugovana kamera mifananidzo yeT Thijs H. pamwe nevakuru vekutonga kuti vawedzere kuongorora. Kiriniki haina kuda kupa mifananidzo kare kare nekuda kwehutano hwehutano. Asi mutongi akatonga kuti ropafadzo iyi yaifanira kupa nzira yekukosha kwekuwana chokwadi. "Ndinonzwisisa kuti iOO inoda kuona mifananidzo uye inotora dare rekuzivisa."
Gweta rinotora kuti mutemo wave wakaputswa nedare rekuzivisa? Icho ndicho chimwe chiratidzo chinoratidza kuti tiri zvakare kubata nechepanhau re PsyOp. Pakutanga nyaya yeJos Brech takaona kuti gweta Gerald Roethof akabvuma pasina kushorwa kuti DNA yakawanikwa mune imwe mhosva yakashandiswa muNicky Verstappen mhosva (pasina mhosva mhosva yekuponda, nokuti hapana uchapupu hwekuuraya). Ikoko, zvakare, mutemo wakaputsika pasina kunetseka. Izvozvo ndezvokwadi bedzi uye zvinogamuchirwa chete, nokuti maitiro akadaro epfungwa akave akatorwa nokuda kwechinangwa ichocho: kugadzirisa mitemo yaisawanzogamuchirwa. Nekwenyanzvi dzemitemo dzePyyOp dziripo, dzinoshungurudza mafudzi avo nekuputsika kwakanyanya kwemurairo, zvose zvaunofanirwa kuita ndezvekutora mhaka yezvino mhosva mumutemo mutsva uye wapedza.
Source chinyorwa listings: rtlnieuws.nl, rtlnieuws.nl, nieuwsopbeeld.nl, telegraaf.nl
Tags: advocaat, Anja, Anne, App, nyanzvi yakavanzika, Faber, Featured, H., psyop, pamwe chete, Makwai, Sherlock, Thijs, kushayikwa, ropafadzo yepamutemo, chokwadi kuwana, mutemo, tsvaga
3 June 2019 pa 13: 19
Iwe unovaziva ... izvo zvinoitika pamagariro evanhu kubva kuvanhu vanoti vanoziva protagonist. Ndiyo iyo inoshanda. Basa rePyyOp rinoongororwa pamagariro ehupfumi nemauto eTroll: vanhu vanozozivisa kuti vanoziva vanhu.
Ngatitsanangurirei: haugoni kutarisa chero huwandu hwemagariro evanhu kuti uone kana ivo varipo chaizvo vanhu. Kunyange zvazvo vane shamwari dzinoronga kana dzinofarira pamifananidzo yavo / mavhidhiyo; kunyange zvazvo vane mapepa emhuri, mavhidhiyo, mifananidzo kubva kune yakapfuura, nezvimwewo. Zvose izvi zvinogona kushandiswa nyore nyore ne software. Iko maawa mashomanana ekushanda kwekudzikisa vavaki. Shamwari, vana, vabereki, nezvimwewo zvinogona kunge zvakadzika uye / kana Inoffizieller Mitarbeiter (state trolls).
Mhinduro dzezvemagariro evanhu hazvikwanisi kutorwa zvakakomba, nekuda kwekuda kwekuti unenge uri chikamu chebasa re psyop iwe unotarisa hurukuro yezvemagariro evanhu kuburikidza nehuwandu hwemaprofayiri uye / kana Inoffizieller Mitarbeiter.
3 June 2019 pa 13: 29
Oo hongu uye "Ndanga ndichikuteverai kwemakore" ndiwo mutsara unovhura wokutanga we psyop kuchengetedza trolls
3 June 2019 pa 14: 21
Kana gweta rinotaura kuti anogamuchira chiziviso kubva kuruvanze kuti azive, zvinoreva kuti haazoiti chero chinhu nacho kana kuti chichibvuma kuti chizive uye hachisisipo.
3 June 2019 pa 14: 34
Hungu, izvi ndizvo zvandinoedza kuita pachena.
3 June 2019 pa 18: 06
Aiwa iwe unotaura Gouda, iro ndiro guta re makandulo 🙂
Chii chinokonzera kuti motokari yakatarisana inoponeswa nguva dzose. Moto yose inopisa moto uye unodzimwa munguva pfupi isati yasvika musango wakavakidzana kana motokari yakatsva moto, inodzorwa zvakanaka, inoti, yakachengetedzwa? 😉
3 June 2019 pa 18: 15
Oo, kwete moto mumwe chete mumotokari pano, mutsara wose wemotokari wapedza kupera. Tisingatyi, chii chatinofanira kuita
unoita izvozvo kuti urege izvi zviitike nokusingaperi?
Ndinomuka akanyora kuti:
3 June 2019 pa 19: 52
Iyo yose inoshanda sei yakave yakawanda yakawanda mufirimu The Circle. Haisi sayenzi yenhema, asi kungoita kuti vanhu vashandiswe nayo kuburikidza nehana iyi. Ndanga ndichitaura izvi kubvira pandakaona firimu.
3 June 2019 pa 19: 53
Ndiri kureva chirongwa cheespionage.
« Iyo inonakidza korani yeMarco Borsato muKuip kuRotterdam!
Anja Schaap asati atsigirwa a PsyOp? Ona pano nei (video) »
Total Visits: 15.891.767
SalmonInClick op Libya inopa kujekesa kuti ndedzipi nyika muEurope dzichava dzekutanga kutorwa neTurkey
Sunshine op Libya inopa kujekesa kuti ndedzipi nyika muEurope dzichava dzekutanga kutorwa neTurkey